आजको राशिफल (२०७४ मार्गशीर्ष १९ गते/२०१७ डिसेम्बर ०५)
December 05, 2017 राशिफल
वि.सं. २०७४ मार्गशीर्ष १९ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१७ डिसेम्बर ०५ तारिख
पौष कृष्ण द्वितीया, मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशिको चन्द्रमा, शुभ योग, तैतिल र गर करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : द्विपुष्कर योग बिहान ०६।५७ बजेसम्म
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : महाराज छत्रशाल धामगमन (कृष्णप्रणामी),
भोलिको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), कर्णवेध(कान छेड्ने), वास्तुमुहूर्त, दीक्षाग्रहण,
राहु काल : दिउँसो ०२:३१ देखि ०३:४९ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०९:१८ देखि १०:३६ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो ११:५४ देखि ०१:१३ सम्म
काल वारवेला : दिउँसो ०१:१३ देखि ०२:३१ सम्म
रोग वारवेला : बिहान ०६:४१ देखि ०८:०० सम्म र साँझ ०३:४९ देखि ०६:४९ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो १०:३६ देखि ११:५४ सम्म
आम्दानीमा कमी आउने छैन तर निरर्थक र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ, त्यसैले सचेत रहनुपर्छ । कृषि, पशुपालन र झिनामसिना घरायसी काममा समय दिनु पर्ने हुन्छ । गरेका कामबाट ठूलो उपलब्धी लिन सकिंदैन र श्रमको समुचित मूल्याङ्कन नहुनाले दिक्क लाग्नेछ । पढाइलेखाइमा समय दिन सकिंदैन । बोलीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । स्थान परिवर्तन अथवा व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ । कुनै नयाँ काममा हात हाल्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने जान्नेबुझ्नेको सुझाव प्राप्त गर्नु बेस हो । मनोरञ्जन र विलासिताका क्षेत्रमा धनखर्चको योग छ ।
चौथो चन्द्रमाले स्वास्थ्यसम्बद्ध समस्या ल्याउनसक्छ, तर डराई हाल्ने परिस्थिति छैन । धैर्यले काम लिने समय छ । घरगृहस्थी र पारिवारिक रमझममा समय व्यतीत हुनेछ । वैदेशिक रोजगारी गर्ने र प्रवास वा परदेशमा रहनेहरूले घरायसी कुरा सम्झेर दिन बिताउने छन् । चुनौतीका बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । बन्दव्यापार राम्रो छ, आकस्मिक रूपमा धनप्राप्तिको सम्भावना देखिन्छ । नचिताएको साथी वा छिमेकीले अप्रत्यासित सहयोग गर्ने सङ्केत पनि छ । शरीर फूर्तिलो भएको महसुस हुनेछ । परिणाममुखी काममा लगानीको समय छ । पति/पत्नी र प्रेमी/प्रेमिकाका बीचमा निकटता बढ्ने छ ।